Liyazihlonza: Ngabe abeNFP bakhokha isikweletu kuZuma? - Bayede News
Liyazihlonza: Ngabe abeNFP bakhokha isikweletu kuZuma?
Uhambo lobuholi oluya kwaDakw’dunuse luvuse imibuzo kunezimpendulo
Kungakapheli isikhathi esingangesonto kwenzenke okungejwayelekile lapho umholi weqembu eliphikisayo kuleli i-Economic Freedom Fighters (EFF), uMnu uMalema, etheleke KwaDakw’udunuse eNkandla. Kuleli sonto kutheleke ubuholi belinye kwaphikisayo iNational Freedom Party (NFP) nebiholwa nguNobhala walo kuzwelonke uMnu uCanaan Mdletshe. UMsindazwe ucashunwe ethi ngukuthi ubuholi beqembu lakhe bumi noZuma empini yakhe neKhomishini ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso kanjalo nokuphikisana nesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo.
Uthe bayakholwa ukuthi ekugcineni uZuma ngesenzo sakhe uvikela uMthethosisekelo. Kwabanye uhambo lweNFP kungenzeka luyibuyise emdlalweni njengoba bese kungasabikwa ngayo kakhulu kwabezindaba ngaphandle kwamacala nayilapho abaholi bebanga ukuphatha. Kwabanye lesi yisenzo esihle sokuzwelana ‘nohlukunyezwayo’ uZuma. Nokho emalungwini kanjalo nasebuholini be-Inkatha Freedom Party (IFP) lokhu kungasho ukuzihlonza kulokho abebekusole ngaphambili ukuthi ukuphuma kwamalungu alo athile inxiwa kubalwa nowayenguSihlalo weqembu kuzwelonke uMhlonishwa uKaMagwaza Msibi kwabe kuluhlelo lukaKhongolose. Lapha uZuma wabe esolwa ukuthi nguye ungqondongqondo kulokhu.
Enza isethulo seqembu kuKhomishini kaMoerane eyabe iphenya ngokusocongwa kwabaholi bepolitiki kweleNdlovukazi uMthaniya, uSihlalo kazwelonke we-IFP uMnu uGwala akananazanga ukuthi izalwa ngubani iNFP.
“Udlame oluyame kwezepolitiki olusaqhubeka kunamhlanje – lapho iKhomishini yethweswe umthwalo wokuthi iphenye – lubandakanye bona abamelene. Ukufakwa kweNFP akubaluli lutho olusha nokungqubuzana okwehlukile okungacwaningwa ngokuzimele kwanoma yini eyenzeka ngaphambi kokubumbeka kweNFP. Ngempela, ukungqubuzana kweNFP ne-IFP kuwukuqhubeka nje kokungqubuzana phakathi kwe-ANC ne-IFP, ukuba khona kweNFP kwasekelwa ngezimali futhi kuyiqhingasu le-ANC,” kusho uGwala.
Amagama kaGwala ayehamba kulawo oMntwana waKwaPhindangene nowayengumholi we-IFP ngaleso sikhathi. UMntwana wasola uKhongolose noZuma ngokuqembuka kwamalungu agcina esungule iNFP. Ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal babukuphikisa lokhu buthi yimizamo nje ye-IFP yokufihla ihlazo lokuthi ihlehlelwa zikhuni.
Nokho izinsolo ze-IFP zanda kakhulu ngesikhathi uMengameli wangaleso sikhathi uZuma eqoka umholi we-NFP uKaMagwaza Msibi njengeSekela likaNgqongqoshe kuHulumeni wakhe. Lokhu kwathusa nabathile kuKhongolose. Kwathi nangamhla uKaMagwaza Msibi exinwe wukugula uZuma waqhubeka nokumgcina nokwabe kusho ukuqhubeka nokuthola uxhaso kuHulumeni.
Kuze kube yinamuhla uKaMagwaza Msibi uyakuchitha ukukhuluma okuthi i-NFP izalwa yi-ANC. Isinqumo sokweseka uZuma yiNFP kungenzeka kuqale phansi izinkulumo ngoyise weNFP nokuthi kungenzeka ukuthi ukuvakashela kobuholi bayo eNkandla kungehunyushwe nokubuyisela okuhle uZuma akwenza kumholi nakulo iqembu imbala.